တစ်နေ့တွင် Seville တွင်မြင်ရမည့်အရာများ | ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | 12/05/2022 17:00 | အဆင့်မြှင့်တင် 12/05/2022 18:42 | ကြည့်ဖို့ဘာလဲ, ဆီဗီလာ
အကယ်၍ သင်သည် စပိန်နိုင်ငံသို့ ခရီးထွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်တွင်းခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကာ Seville သို့သွားရန် ဆုံးဖြတ်ပါက၊ သင်မလွတ်နိုင်သော အချို့သောနေရာများနှင့် အတွေ့အကြုံအချို့ရှိပါသည်။ ဘယ်လိုနဲ့ ဘာကိုရွေးချယ်ရမလဲ။ 24 နာရီဆိုတာ အိပ်မက်ထဲမှာ အပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့ ခရီးထွက်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်တာ မဟုတ်ဘူး...။
ဒီတော့ ဒါက ငါတို့ရဲ့စာရင်းပါ။ တစ်နေ့တွင် Seville တွင်မြင်ရမည့်အရာ.
1 Santa Maria ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
4 Seville ၏ရီးရဲလ် Alcazar
7 Triana ခရိုင်
9 San Telmo နန်းတော်
10 Seville မှာစားတယ်။
11 flamenco ရှိုးကိုကြည့်ပါ။
Santa Maria ၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်း
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မြို့၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဥရောပရှိ အကြီးဆုံး Gothic ဘုရားကျောင်းဖြစ်သည်။ဒါကြောင့် ဒီဗိသုကာပုံစံကို ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ လက်မလွတ်နိုင်ပါဘူး။ အထဲမှာ Christopher Columbus ၏ သင်္ချိုင်းခရီးစဉ်အတွက် ဆွဲဆောင်မှု တိုးစေပါသည်။
ဝယ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ Cathedral၊ Giralda နှင့် El Salvador ဘုရားကျောင်းတို့ကို သွားရောက်လည်ပတ်ရန် လက်မှတ်ပေါင်းအားလုံး 10 ယူရို။5ယူရိုထပ်ထည့်ရင် အသံလမ်းညွှန်ကိုယူပါ။ La Giralda သည် တစ်ချိန်က မြို့၏ အမြင့်ဆုံးသော ခေါင်းလောင်းမျှော်စင် ဖြစ်သည်။
မျှော်စင်ကို ပြန်လည်မွမ်းမံစဉ်အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မူရင်းဗားရှင်းမှာ တစ်ချိန်က ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း၏နေရာတွင် ရပ်ထားသည့် ဗလီ၏မိုင်းနားကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ သင်သည် ဤနေရာမှ ကျက်သရေရှိသော မြင်ကွင်းကို ခံစားရသော်လည်း လှေကားမရှိ၊ ချောသော ချဉ်းကပ်လမ်းသာ ရှိသည်ကို သတိထားပါ။ စွန့်စားရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ရောင်စုံဘုရားကျောင်း အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောစတိုင်နှင့်အတူ။ ၁၇ နှင့် ၁၈ ရာစုကြားတွင် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အတွင်းဝင်ပေါက်ကိုကြည့်ရန် ၈ ယူရိုကျသင့်သည်။
စတုရန်းသည် လူကြိုက်အများဆုံး စတုရန်းဖြစ်ပြီး၊ လှေငယ်များဖြင့် လည်ပတ်နေသော ရှည်လျားသော တူးမြောင်းကြီးဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ ၎င်းသည် María Luisa ပန်းခြံအတွင်းတွင်ရှိပြီး စပိန်ဗိသုကာပညာရှင် Aníbal González Álvarez Ossorio၊ 1929နိုင်ငံရပ်ခြား ကိုလိုနီများနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပြည်ထောင်စုကို ကိုယ်စားပြုသည်။
စတုရန်းအလှည့်ပါရှိသည်။ ထောင့်ပေါင်းစုံမှ ရောင်စုံကြွေပြားများ ပြည် ၎င်းသည် Gualdaquivir မြစ်၊ အတ္တလန္တိတ်သို့သွားသောလမ်းနှင့် အမေရိကန်ကိုလိုနီများဆီသို့ အတိအကျပွင့်သည်။ ရင်ပြင်သည် Avenida de Isabel la Católica တစ်လျှောက်တွင်ရှိပြီး အများသူငှာ လွတ်လပ်စွာ ဝင်ခွင့်ပြုထားသည်။
ရင်ပြင်မှာလည်း တွေ့ရလိမ့်မယ်။ ရထားများ. မြို့ပတ်လမ်းလျှောက်ဖို့ သူတို့ကို ဘုရားကျောင်း တံခါးဝမှာ ခေါ်သွားလို့ရတယ်။ စံပြလမ်းကြောင်းမှာ ဘုရားကျောင်းတွင် စတင်ပြီး Plaza de España ရောက်သည်အထိ María Luisa ပန်းခြံကို ဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ စီးနင်းမှုကောင်းပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူလေးဦးအတွက် ၃၆ ယူရိုခန့် ကုန်ကျသည်။
မြင်ကွင်းများစွာကို သင်သိပါသလား။ Thrones ၏ဂိမ်း?
Plaza de España မှ မိနစ်အနည်းငယ် လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ ဒါက XNUMX ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောကျော်ကြားသောနန်းတော်ဆယ့်လေးရာစုတွင်ရှိသော်လည်း၊ ၎င်းကို mudejar ပုံစံဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။. ယနေ့ခေတ်တွင် အချို့သော အဆောက်အအုံများကို တော်ဝင်မိသားစုများက ၎င်းတို့၏ တရားဝင်နေထိုင်ရာအဖြစ် အသုံးပြုနေကြဆဲဖြစ်သည်။
အဆိုပါခံတပ်သည် ဥရောပတိုက်တွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် ရှေးအကျဆုံးနန်းတော်ဖြစ်ပြီး 1987 ခုနှစ်ကတည်းက ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူနက်စကိုစာရင်း။
ဤမျှော်စင်သည် မူလဖြစ်သည်။ မြို့ရိုးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် Alcázar ကို ကျန် Seville နှင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ Guadalquivir မြစ်ကိုဖြတ်၍ လမ်းကြောင်းကိုထိန်းချုပ်ပါ။. ဝင်ပေါက်သည် ၃ ယူရိုဖြစ်သည်။
မြို့ကိုဖြတ်၍ ဘုရားကျောင်းသို့သွားလျှင် ဤအရာကို ဖြတ်ကျော်ရလိမ့်မည်။ ကျယ်ဝန်းပြီး ကျယ်ဝန်းလှသော စတုရန်းပုံများဖြင့် လှပသော အဆောက်အအုံများ ဝန်းရံထားသည်။. ယနေ့ခေတ်တွင် အဆိုပါ အဆောက်အအုံများထဲမှ အချို့ကို နာမည်ကြီး ဒီဇိုင်နာဆိုင်များမှ သိမ်းပိုက်ထားသည်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ ပြည့်နှက်နေသည့်နေရာမဟုတ်သောကြောင့် လူသားခရီးစဉ်ပြင်ပပုလဲများကို ရှာဖွေနေပါက ယင်းတို့ထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်လမ်းလျှောက် Seville ၏ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံးနှင့်ရောင်စုံခရိုင်များထဲမှတစ်ခု ထိုက်တန်ပါတယ်။ မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းမှာ တည်ရှိပြီး တံတားကို ဖြတ်ကူးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်က စုန်းပညာနဲ့ စွပ်စွဲခံရသူတွေကို မြှုပ်နှံထားပုံရတယ်..။
ဤခေတ်မီဖွဲ့စည်းပုံအား ဗိသုကာပညာရှင် Jurgen Mayer မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ကာ မေ့ပျောက်နေသော မြို့ပြစတုရန်းကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ပြန်လည်အသက်သွင်းခဲ့သည်။ ဤအရာများသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာအချို့ပါရှိသော သစ်သားထီးများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ကောင်းသောရှုခင်းများကိုခံစားရန် စားသောက်ဆိုင်များနှင့် မြင်ကွင်းကျယ်ကျယ်များရှိသည်။
အလွန်ရှေးကျသောမြို့၌ ခေတ်မီသော ထိတွေ့မှု။
San Telmo နန်းတော်
ပြေပြစ်သော အဆောက် အအုံသည် အနေတော်ဖြစ်သည်။ XVII ရာစုယနေ့ Andalusia ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအစိုးရလက်ထဲတွင်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် ဗိသုကာပညာရှင် Leonardo de Figueroa ၏ လက်မှတ်ဖြင့် ၎င်း၏ ဟင်းလင်းပြင်တစ်ခုမှ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် လှပသော Baroque ပုံစံ ဘုရားကျောင်းတစ်ခု ရှိသည်။
Mudejar ပုံစံဖြင့် မြို့တော်ရှိ ရှေးအကျဆုံး အဆောက်အဦများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းအတွက်သာမက၊ တိုက်ရိုက်အတွေ့အကြုံများဒါဆို Seville မှာ သင်ခံစားရမယ်။ ဒေသခံ gastronomy နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Duenas ဘား။ အိမ်ပုံစံဟင်းလျာများချက်ပြုတ်သည့် ဘားငယ်ဖြစ်ပြီး နံနက် ၈ နာရီတွင် ဖွင့်လှစ်သည်။ ထိုနေရာ၌ စားနိုင်သည် သို့မဟုတ် အစာဝယ်ပြီး လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
ဘား Palacio de las Duenas ရှေ့တွင်တည်ရှိသည်။XNUMX ရာစုနှောင်းပိုင်းတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည် XNUMX ရာစုအထိ Alba မြို့စားများ၏အိမ် အထင်ကြီးလောက်စရာ အနုပညာ စုစည်းမှုနှင့်အတူ။ သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏အတွင်းပိုင်းနှင့်၎င်း၏ဥယျာဉ်များကိုလေ့လာပါ… ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘားက 8 မှာဖွင့်ပေမယ့်နန်းတော်က 10 မှာသာဖွင့်တယ်။
နောက်ထပ် အကြံပြုထားတဲ့ နေရာကတော့ စားဖို့ပါ။ Santa Cruz ရပ်ကွက်၊ အလွန်ခရီးသွားများ ဒါပေမယ့် အဲဒါအတွက် သိပ်မကောင်းပါဘူး။ ၎င်းသည် XNUMX ရာစုမှစတင်ခဲ့သည်၊ အများစုမှာ၎င်း၏ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများနှင့်လမ်းကြားများတွင်အဟောင်းအငွေ့အသက်များကိုတွေ့နိုင်သော်လည်းအများစုအတွက်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရင်ပြင်မှာရှိတယ်။ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ဘားများနှင့် ကော်ဖီဆိုင်အရေအတွက်။
နောက်ဆိုဒ်တစ်ခုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘားဂွန်ဇာလက်Seville Cathedral ၏ဆန့်ကျင်ဘက်။ အဝါရောင်အဆောက် အအုံဖြစ်ပြီး စျေးနှုန်းက သိပ်မသက်သာပေမယ့် ဟင်းပွဲတွေက တကယ်အရသာရှိပါတယ်။ လူနှစ်ယောက်အတွက် ကြက်သားနဲ့ paella တစ်လုံးကို ၂၂ ယူရိုနဲ့ နေ့လယ်စာ စားနိုင်ပါတယ်။
Flamenco နှင့် Seville တို့သည် အဓိပ္ပါယ်တူသောကြောင့် ကောင်းသောရှိုးပွဲတစ်ခုကို ပျော်ရွှင်စွာ ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင် ထည့်သွင်းသင့်ပါသည်။ ရှိုးများစွာရှိသော်လည်း Calle Águilas တွင်ဖြစ်သည်။ Flamenco ပြတိုက်၊ ဤအကအကြောင်း လေ့လာရန်နှင့် ရှိုးပွဲ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် နေရာကောင်း။
အကယ်၍ သင်သည် မြို့၌ တစ်ညတာ ကုန်ဆုံးပါက၊ Flamenco ရှိုးများနှင့်အတူ ဤစားသောက်ဆိုင်များအနက်မှ အပြင်ထွက်စားရန် အကောင်းဆုံးမှာ မဟုတ်ပါက ပြတိုက် အမြဲရှိနေပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » စပိန်မြို့ကြီးများ » ဆီဗီလာ » တစ်နေ့တွင် Seville တွင်မြင်ရမည့်အရာ